ကုလသမဂ္ဂ၏ အရေးယူမှု ဆုံးဖြတ်ချက် အသစ်ကို မြောက်ကိုရီးယားက စစ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ရပ်အဖြစ် ပြစ်တင? - Yangon Media Group
ကုလသမဂ္ဂ၏ အရေးယူမှု ဆုံးဖြတ်ချက် အသစ်ကို မြောက်ကိုရီးယားက စစ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ရပ်အဖြစ် ပြစ်တင?
ဆိုးလ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅
မြောက်ကိုရီးယားက ကုလသမဂ္ဂ၏ နောက်ဆုံးပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ပြင်းထန်သော စကားလုံးများ ဖြင့် တုံ့ပြန်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ နျူကလီးယားနှင့် ဒုံးပျံအစီအစဉ်အ ပေါ် အရေးယူခြင်းမှာ စစ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းက ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားရာတွင် အပြင်းထန်ဆုံး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမှာ အမေရိကန်၏ ပို၍ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရမှုပင် ဖြစ်ကြောင်းစွပ်စွဲလိုက်သည်။ မြောက်ကိုရီးယား၏ KCT ရုပ်သံက ကြေညာချက်ကို ဖတ်ကြားရာတွင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၂၃၉၇ ကို ရှုတ်ချကြောင်း၊ မြောက် ကိုရီးယားကို ရေနံတင်ပို့ရောင်းချခြင်းမပြု ရန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားများကို ပြင်ပ၌အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုရန်တို့ ပါဝင်သည်။ မိမိတို့က ဤပိတ်ဆို့မှုမှာ အမေရိကန်နှင့် နောက်လိုက်များက ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသာဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ဆိုးရွားစွာစွက်ဖက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ပြုသည့်အမူအကျင့်ဖြစ် ကြောင်း၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်၏ တည်ငြိမ် ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကို စစ်ရေးအရချိုး ဖောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဤ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတိအကျအပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော် ပြလိုက်သည်။
၎င်းကဆက်လက်၍ မြောက်ကိုရီးယား၏ နျူကလီးယားလက်နက်မှာ ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီး ရန်စကျူး ကျော်မှုကို တိုက်ဖျက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် အနိုင်ကျင့်မှုကို ခုခံရန်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်ချက်လုပ်ပြီး ရေနံများကို မြောက်ကိုရီးယားသို့ မတင်ပို့ရေး၊ ရေနံစိမ်းများကိုပါ ရပ်တန့်ရေးနှင့် မြောက်ကိုရီးယားသို့ တရားမဝင်ရေနံတင် သင်္ဘောများမကပ်ရေး၊ မြောက်ကိုရီးယား ဝင်ငွေလျော့နည်းစေရန် နိုင်ငံများက လုပ် ဆောင်ရေးတို့ ပါဝင်သည်။ တရုတ်၏ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် ဝူဟိုင်တောင်က ယခုဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယား၏ နျူကလီးယားလက်နက်နှင့် ဒုံးပျံလုပ်ငန်းကို ဆန့်ကျင်ရန်ဖြစ် ပြီး နိုင်ငံတကာနျူကလီးယား မပြန့်ပွားရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြေကြားလိုက်သည်။
အစ္စရေးကို တိုက်ခိုက်မှု လျော့နည်းသွားသော်လည်း ထရန့်၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် မတည်ငြိမ်မှုက ပိုမိုမြင
နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ အတွင်း စီမံကိန်းတွင် မပါသည့်မြေများ အမြန်ဆုံးပြန်ပေးသင့်ကြောင်း
မြန်မာ့ငှက်ပျော ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် GAP လက်မှတ်ရရှိရေး လျှောက်ထား
ကားနှစ်စီး အရှောင်အတိမ်း ခက်သည့် ကမ္ဘားနီ မီးရထားကူးတံတား အသစ်ဆောက်မည်
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အီကိုလီရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ကိုးဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ
နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရသည့် သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် အယူခံဝင်မည့် အယူခံကို သေချာပြန်
‘မနှစ်ကထက် ပိုပြီးတော့ တာဝန်ကြီးတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်’ တင်ဇာမော်
အာကာသအတွင်း နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခု၏ အလေးချိန်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များက ဖော်ပြ